Mobile – Myanmar Unicode® Migration
အမျိုးအစား ဗားရှင်း ဖောင့် ကီးဘုတ် မိုဘိုင်းဖုန်း အန်းဒရိုက် (Android) အန်းဒရိုက် ၄.၄ (KitKat) နှင့်အထက် (၁) ဘာသာစကား (Language) ပြောင်းရန် (သို့) ဂျီဘုတ်၊ ပုဂံ၊ ဖရိုးဇဲန် အစရှိသော (Gboard, Bagan, Frozen, etc.) ကီးဘုတ်တွင်ယူနီကုဒ်ရွေးချယ်ရန် (၂) သီးမ် (Theme) ပြောင်းရန် (သို့) (၃) ဖောင့် (Font App) ထည့်သွင်းရန် (သို့) (zfont,ifont etc.) (၄) ရူ့ထ်(root) ပြုလုပ်၍ဖောင့်အမှန်သွင်းရန်(သို့) (၅) Firmware လဲရန် အခြား အမ်ယူအက်ခ်စ် (MCF MUX) ကဲ့သို့သော SMS App များ အိုင်ဖုန်း (iPhone) အိုင်အိုအက်စ် […]
Android ဖုန်းတွေမှာ မြန်မာယူနီကုဒ်လက်ကွက်ဖြင့် ရေးသားနိုင်သော keybboard အမြောက်အများရှိပါတယ်။ဒီထဲမှာမှ အသုံးများတဲ့ Gboard keyboard နဲ့ tt keyboard တို့ကိုအသုံးပြုပြီး စာရေးသားပုံတို့ကို ရှင်းပြပေးသွားမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံး Gboard keyboard လင့်ကို အောက်တွင် ဒေါင်းယူလိုက်ပါ။Gboard keyboard ကိုတော့ andriod version အားလုံးမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Gboard – Google Keyboard ရယူရန် PlayStore သို့မဟုတ် apkPure -ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ Gboard keyboard ကိုနှိပ်ပါ။-Enable setting ကိုနှိပ်ပြီး Language and input setting ထဲက Gboard ကိုဖွင့်ပါ။-Select inputmethod မှာ Gboard ဆိုတာကိုရွေးပါ။-ပြီးရင် languages ထဲက searchbox […]
မြန်မာစာပါပြီးသား (မြန်မာယူနီကုဒ်စနစ်) ဖုန်းတစ်လုံးကို ပြောင်းလဲသုံးစွဲသူ တစ်ယောက်အနေဖြင့် ကြုံရတဲ့ အခက်အခဲတစ်ခုကတော့ အရင်ဖုန်းအဟောင်းက ဖုန်းခေါ်တဲ့ လူနာမည် လိပ်စာတွေ ကို ဖုန်းအသစ်ထဲ ပြောင်းထည့်လိုက်တဲ့အခါ ဖတ်ရှုလို့မရတဲ့ အနေအထား မျိုးဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ ( ဇော်ဂျီဖောင့်နဲ့ ရေးထားတဲ့ စာသားကို ယူနီကုဒ်ဖောင့်ဖြင့် ဖတ်မရတဲ့ အခက်အခဲပါ) ဒီတော့ ဇော်ဂျီဖောင့် ကနေ ယူနီကုဒ် format ဖြစ်အောင် ပြောင်းပေးလို့ရပါတယ်။ အစအဆုံး ပြန်ပြင်ရိုက်နေရရင်တော့ များရင်များသလောက် ကြာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လွယ်ကူ မြန်ဆန်မယ့် နည်းတစ်ခုကို ဖေါ်ပြပေးချင်ပါတယ်။ လိုအပ်ချက်တွေက – 1. ဂူးဂဲ contact သုံးဖို့ အင်တာနက် ရှိရပါမယ်။ 2. ဇော်ဂျီ မှ ယူနီကုဒ်ပြောင်းဖို့ converter လိုပါတယ်။ 3. […]
မြန်မာစာယူနီကုဒ်စနစ်ကို သုံးစွဲသူများအဆင်ပြေပြေ အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွတ် software တွေ application တွေ add-ons တွေကို ထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ယခုလတ်တလောတွင်လည်း PK Converter (for PC) ကိုပြုလုပ်ပေးထားတဲ့ Phyoe Kyaw မှ Android အတွတ် PK Converter နဲ့ PK SMS application နှစ်မျိုးကိုထပ်မံပြုလုပ်လိုက်ပါပြီ။PK Converter ကတော့ယူနီကုတ်နှင့် ဇော်ဂျီကို အပြန်အလှန်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ application လေးဖြစ်ပါတယ်။PK SMS ကတော့ဖုန်းတွေမှာ မူရင်းပါးပြီးသား SMS application လိုစာတွေကို ယူနီကုဒ်ဖြင့်လည်းကောင်း ဇော်ဂျီဖြင့်လည်းကောင်း မိမိ စိတ်တိုင်းကျ ပို့နိုင်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးမယ့် application လေးဖြစ်ပါတယ်။Google Playstore မှလင့်များဖြင့်ချိတ်ဆက်ပေးထားသောကြောင့် up to date version ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ PK Converter […]
Root ရှိ​ဖို့​လို​ပါ​တယ်။ Root explorer သို့ အခြား root access ရ​နိုင်​တဲ့ file manager တစ်​ခု⁠ခု​နဲ့ /system/csc/ ထဲ​က features.xml နဲ့ others.xml အဲ​ဒီ​ဖိုင်​နှစ်​ခု​မှာ TRUE အဲဒီထဲက ThaiViet Reshaping မှာ TRUE ရေးထား​တာ​ကို FALSE လို့​ပြင်​ရေး​လိုက်​ပါ။ ThaiViet Reshaping စာ​ကြောင်း​ကတော့ Thai region မဟုတ်​ရင်​မ​ပါ⁠ပါ​ဘူး။ ပြီး​ရင် /system/etc/ အောက်​က fallback_fonts.xml fallback_fonts_sbrowser.xml ဖိုင်​တွေ​မှာ​အောက်​က ကုဒ်​တွေ​ဖျက်​ရ​ပါ​မယ်။ ZawgyiOne2008.ttf အထက်​မှ​ကုတ်​ပါ​မှ​သာ မ​ပါ​လျှင်​ဘာ​မှ​လုပ်​စရာ မ​လို​ပါ။ ပြီး​ရင်/system/fonts/ အောက်​မှာ Padauk-book.ttf ဖိုင်​အား​ထည့်​ပါ။Padauk-book.ttf ၏ permission အား rw-r–r– အဖြစ် Root explorer […]
Unicode အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့မိမိရဲ့ဖုန်း message မှာဇော်ဂျီနဲ့စာတွေဝင်လာလို့ဖတ်မရတာမျိုးတွေကြုံနေရပြီဆိုဒီ Myanmar SMS software လေးကအကူအညီပေးပါလိမ့်မယ်။ဒီ Myanmar SMS software ကဇော်ဂျီနဲ့ဝင်လာတဲ့စာတွေကိုယူနီကုဒ်အဖြစ်ပြောင်းလဲဖော်ပြပေးမှာဖြစ်လို့ယူနီကုဒ်အသုံးပြုသူတွေအတွတ်အဆင်ပြေစွာ message တွေကိုဖတ်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။Andriod version 2.3.3 နှင့်အထက်ဖုန်းတွေမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။Up To Date ဖြစ်စေရန် Google Play Store လင့်နှင့်ချိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ Myanmar SMS Myanmar SMS ရယူရန်
iOS အတွတ် Myanmar Unicode Keyboard တွေကိုစုစည်းပေးထားပါတယ်။ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Keyboard ကိုရွေးချယ်၍စမ်းသပ်အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။Up To Date ဖြစ်စေရန် iTunes Store လင့်များနှင့်ချိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ WeKey Keyboard MWeKey Keyboard ရယူရန် ဇော်ဂျီနဲ့ Myanmar3ဖောင့်ရောကီးဘုတ်ပါနှစ်မျိုးစလုံးပါဝင်တဲ့ keyboard တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။iOS 7.1 နှင့်အထက်ဖုန်းတွေမှာအသုံး ပြုလို့ရပါတယ်။ MM Complex Keyboard MM Complex Keyboard ရယူရန် iOS 8.0 နှင့်အထက်ဖုန်းတွေမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ယူနီကုဒ်အနေနဲ့စာရိုက်နိုင်သလိုဇော်ဂျီနဲ့လည်းအဆင်ပြေပြေစာရိုက်နိုင်တဲ့ keyboard လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ TT Keyboard TT Keyboard ရယူရန် ဇော်ဂျီရောယူနီကုဒ်ပါစာရိုက်နိုင်သလိုတိုင်းရင်းသားဘာသာစာတွေပါရိုက်နိုင်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေအနေနဲ့ ရှမ်း၊ခမာ၊ မွန်၊ ပအို့ဝ်တို့ဖြစ်ပြီးမြန်မာယူနီကုဒ်အတွတ်မြန်စံလက်ကွက်ပါဝင်ပါတယ်။iOS အတွတ်အကောင်းမွန်ဆုံး keyboard တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။iOS 8.0 နှင့်အထက်ဖုန်းတွေမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ Kayah […]